Orinasa fantsom-pitrandrahana masinina any Sina | TAA
Ny kojakoja famaohana milina fanapoahana anisan'izany ny: vanes kodiarana, impeller, caster impeller, barazy impeller, lohan'ny impeller, takelaka mpiambina, lovia fisaronana sy ny sisa.
Votoatin'ny Cr-12%, 20%, 25% na fangatahana.
Fomba fanodinana mandroso sy siantifika Fomba sy teknolojia.
Fahombiazana avo lenta ary mandeha ho azy ny tsipika famokarana maina.
Famborana chromium avo lenta manokana manaparitaka vy, manamboatra banga ao amin'ny indostrialy anatiny.
Misy ny ampahany Original Equipment Manufactured (OEM).
Izahay dia manolotra ihany koa ny ampahany lafo vidy ho an'ny milina marika hafa.
Teo aloha: Kodiarana fipoahana
Manaraka: Fanapahana kapila FS-01 andiany
Cage Control Control Wheel
Fitaovana miantra amin'ny milina fanapoahana
Tapitra ny takelaka
Rafitra fiarovan-tena miaro
Takelaka amin'ny lafiny
Sombiny amin'ny milina fanapoahana
Ny elatry ny impellers
Takelaka mpiambina ambony
Fitifirana kodiarana kodiarana
Ny tombony amin'ny milina fipoahana amponga amponga azo antoka Azo antoka ny teknolojia fanapoahana: ny milina fipoahana amponga amponga dia amboarina amina karazana, karazany ary habe samihafa. Kambana izy ireo ary dian-tongotra kely dia kely fotsiny. Ny throughput mitohy dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo masinina maro. Layout friendly-maintenance: Ny fikojakojana tsy tapaka dia zava-dehibe amin'ny fitehirizana ny lanjan'ireo fitaovana maharitra. Serivisy lehibe sy varavarana fanaraha-maso manome mora ac ...